युएई । विगत १ महिनादेखि पाठेघर क्यान्सरको उपचार गराइरहेकी झापा हल्दिवारीकी ४० वर्षीया तारा गुरूङले आफुूलाई बचाइदिन सबैमा अनुरोध गरेकी छिन् ।
युएईको अलऐनस्थित तवाम अस्पतालमा उपचार गराइरहकी उनको स्वास्थ्य बिमाले औषधीलगायत अन्य उपचार सम्भव नभएपछि आर्थिक सहयोग गर्न सबैमा अपिल गरेकी हुन् ।
विगत ६ बर्षदेखि रोजगारीको सिलसिलामा युएई आएकी गुरूङ गत नोभेम्बरमा सामान्य बिरामी परि उपचारको लागि अस्पताल जाँदा पाठेघरको क्यान्सर भएको थाहा पाएकी थिइन् ।
श्रीमानले अर्को बिहे गरेपछि एक्लो बनेकी २ छोराको तारा माइतीको साहरामा झापामा बस्दै आएकी थिइन् । आफ्ना दुई छोराहरुको उज्वल भविष्यको सपना बोकेर युएई आएकी उनी परदेशी भूमिमा क्यान्सरसँग लडिरहँदा कस्को मन नदुख्दो होला र ? उनी उपचारसँगै एक हप्तोखि तवाम अस्पतालको निःशुल्क आवास गृहमा बस्दै आएकी छिन् ।
अलऐनको एक प्रतिष्ठित क्लिनिङ कम्पनीमा काम गर्दै आएकी तारा आकस्मत यसरी बिरामी पर्दा कम्पनी पनि अन्योलमा पर्यो । कम्पनीले आफ्ना सबै कामदारको बिमा त गरेको थियो । तर बिमा कम्पनीले विविध कारण देखाउँदै ताराको उपचारमा समस्या आएको थियो ।
बिमाको समस्या आएपछि उनी काम गर्ने स्कुलका शिक्षकशिक्षिकाहरूको व्यक्तिगत पहलमा करिब साढे ३ लाख रूपैयाँ अर्थात् (१० हजार दिराम) अस्पतालमा जम्मा गरि उपचार शुरू गराएका थिए ।
उपचारसँगै अस्पतालको निःशुल्क आवास गृहमा बस्दै आएकी उनलाई नेपाली दुतावासको बिशेष पहलमा बिमा नविकरण गराई उपचारमा सहज पारिएको बिरामी कुरूवा सरस्वती बास्तोला बँताउछिन् । मासिक ८ सय दिराम तलबले २ छोराहरूको पढाई, घरखर्चमा नै सकिएकोले बचत नभएको तारा बँताउछिन् ।
झापाली समाज युएईको आजीवन सदस्य तथा क्षेत्रिय समिति अलऐनका सदस्य समेत रहेकी तारालाई झापाली समाज युएईले उपचार सहयोग समिति बनाइ सहयोग गरिरहेको छ ।
वि.सं. २०७५ आश्विन १० गते बुधबारको राशिफल
गलत ढंगले सास लिँदा उमेर घट्छ, के हो सही तरिका ?
ब्युटी प्रडक्ट खरिद गर्नुअघि
इमेल चलाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा
घ्युकुमारीको जुस पिउदा र लगाउदा फाइदै फाइदा ! यो अति उपयोगी टिप्स सबैका लागि एक अर्काले सेयर गरौँ
यसकारण नखानुस् धेरै कागती पानी
यस्ता खानेकुरा खाने मानिसलाई १०० % क्यान्सर रोग लाग्ने
स्वस्थ रहने ३४ तरिका, अाफू जानाैं,जस्ले तनाव हटाउँछ अरूलाइ सेयर गराैं
उचाई कम भएर तनावमा हुनुहुन्छ ? चमत्कारीक उचाई बढाउन आजै अपनाउनुस् यस्तो घरेलु उपाय
महिला स्वास्थ्यका लागि आवश्यक सुपर फुड, यसकारण खानैपर्छ